သူမအနေနဲ့ ကလေးကို တစက် မှ မလိုချင်တာမို့ "ကလေးတွေအများကြီးရပါစေ"လို့ ဆုတောင်းပေးသူတွေကို အင်မတန်စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အေးငြိမ်းဆွေ( အမရာဆွေ ) - Maythadin
သူမအနေနဲ့ ကလေးကို တစက် မှ မလိုချင်တာမို့ “ကလေးတွေအများကြီးရပါစေ”လို့ ဆုတောင်းပေးသူတွေကို အင်မတန်စိတ်ပျက်တယ်ဆိုတဲ့ အေးငြိမ်းဆွေ( အမရာဆွေ )
ပရိသတ်ကြီးရေ ???? အလှမယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ အလှမယ် အေးငြိမ်းဆွေကိုတော့ အထူးအထွေ မိတ်ဆက်ပေးစရာမလိုအောင် ချစ်ခင်ရင်းနှီးပြီးသားဖြစ်မယ် ထင်ပါတယ်.။ အေးငြိမ်းဆွေကတော့ ???? ??????? ????????????? ( ???? ) ရဲ့ သရဖူကို ရရှိပိုင်ဆိုင်ထားသူ ???? တစ်ဦးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်။
အေးငြိမ်းဆွေ ကတော့ ပြီးပြည့်စုံတဲ့ အလှပိုင်ရှင်လို့ ဆိုရလောက်အောင် အဆင်းရော အချင်းပါ ပြည့်စုံသူလေးပဲဖြစ်ပါတယ်နော်.။ အိမ်ထောင်ရေးမှာလည်း ပျိုမေတိုင်းအားကျရတဲ့ ပျော်ရွှင်သာယာအေးချမ်းတဲ့ အိမ်ထောင်ရေးကို ပိုင်ဆိုင်ထားရသူပါ။ခင်ပွန်းဖြစ်သူနဲ့ ရည်းစားသက်တမ်း မကြာခင်မှာပဲ လက်ထပ်ဖြစ်ခဲ့
ပေမယ့် အိမ်ထောင်သက်တမ်းကြာလာတာနဲ့အမျှ ချစ်ခင်ပေးသူ ခင်ပွန်းကြောင့် ပျော်ရွှင်နေရသူ အေးငြိမ်းဆွေက ကလေးမယူသေးတဲ့အပေါ် ပြောတဲ့ ကိစ္စတွေနဲ့ကြုံတိုင်းသူမခံစားချက်တွေကို ရင်ဖွင့်ကာ တင်လေ့ရှိသူပါ.။နိုဝင်ဘာလ (၁၈)ရက်နေ့မှာလည်း အေးငြိမ်းဆွေက “လိုချင်မှန်းမသိ မလိုချင်မှန်းမသိ ။
သားသမီးတွေ အများကြီး ရပါစေလို့ ဘာလို့ ဆုတောင်းပေးတာလဲဟင်? တစက်မှ မလိုချင်လို့ အဲ့လို ဆုတောင်းတွေ မြင်ရင် အင်မတန် မနောပျက်ရပါတယ်နော်…သိဘို့” ဆိုပြီး သူမရဲ့ ?? ??? မှာ တင်လာခဲ့ပါတယ်။
ဖတ်ရှု့ပေးခဲ့ကြတဲ့ ပရိသတ်ကြီးလည်း ပျော်ရွှင်သာယာတဲ့ နေ့လေးတစ်နေ့ကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေလို့ ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်နော်။
ပရိသတျကွီးရေ ???? အလှမယျတဈဦးဖွဈသူ အလှမယျ အေးငွိမျးဆှကေိုတော့ အထူးအထှေ မိတျဆကျပေးစရာမလိုအောငျ ခဈြခငျရငျးနှီးပွီးသားဖွဈမယျ ထငျပါတယျ.။ အေးငွိမျးဆှကေတော့ ???? ??????? ????????????? ( ???? ) ရဲ့ သရဖူကို ရရှိပိုငျဆိုငျထားသူ ???? တဈဦးပဲဖွဈပါတယျနျော။
အေးငွိမျးဆှေ ကတော့ ပွီးပွညျ့စုံတဲ့ အလှပိုငျရှငျလို့ ဆိုရလောကျအောငျ အဆငျးရော အခငျြးပါ ပွညျ့စုံသူလေးပဲဖွဈပါတယျနျော.။ အိမျထောငျရေးမှာလညျး ပြိုမတေိုငျးအားကရြတဲ့ ပြျောရှငျသာယာအေးခမျြးတဲ့ အိမျထောငျရေးကို ပိုငျဆိုငျထားရသူပါ။ခငျပှနျးဖွဈသူနဲ့ ရညျးစားသကျတမျး မကွာခငျမှာပဲ လကျထပျဖွဈခဲ့
ပမေယျ့ အိမျထောငျသကျတမျးကွာလာတာနဲ့အမြှ ခဈြခငျပေးသူ ခငျပှနျးကွောငျ့ ပြျောရှငျနရေသူ အေးငွိမျးဆှကေ ကလေးမယူသေးတဲ့အပျေါ ပွောတဲ့ ကိစ်စတှနေဲ့ကွုံတိုငျးသူမခံစားခကျြတှကေို ရငျဖှငျ့ကာ တငျလရှေိ့သူပါ.။နိုဝငျဘာလ (၁၈)ရကျနမှေ့ာလညျး အေးငွိမျးဆှကေ “လိုခငျြမှနျးမသိ မလိုခငျြမှနျးမသိ ။
သားသမီးတှေ အမြားကွီး ရပါစလေို့ ဘာလို့ ဆုတောငျးပေးတာလဲဟငျ? တစကျမှ မလိုခငျြလို့ အဲ့လို ဆုတောငျးတှေ မွငျရငျ အငျမတနျ မနောပကျြရပါတယျနျော…သိဘို့” ဆိုပွီး သူမရဲ့ ?? ??? မှာ တငျလာခဲ့ပါတယျ။
ဖတျရှု့ပေးခဲ့ကွတဲ့ ပရိသတျကွီးလညျး ပြျောရှငျသာယာတဲ့ နလေ့ေးတဈနကေို့ပိုငျဆိုငျနိုငျကွပါစလေို့ ဆုတောငျးပေးလိုကျပါတယျနျော။
တရားစွဲဆိုခံခဲ့ရတဲ့အပေါ် ပြန်လည်ကာတုံ့ပြန်​ပြောလာခဲ့​သော ​မြန်မာအိုင်ဒေါမှ အဆိုတော် ဘနားနား (ခြိမ့်ကေကို)